my kitchen my life: စားကြမယ်ဟေ့ italian food ၁၀
My Kitchen Note
book for foods
စားကြမယ်ဟေ့ italian food ၁၀
sogliola filettata in in salsa mugnaiaetartare di gamberi trifolati con risottinodorzo
fillet of sole in mugnaia sauce, served withaprown tartare and barley risotto.
Posted by leo mark at 5:02 PM
Labels: food pic
ရေးချင်ရာ ရေး ဗျာ။
what i done
what i done December (4) March (1) July (3) June (1) April (4) March (2) February (2) January (7) August (4) July (4) May (1) March (6) February (4) January (7) December (5) November (6) October (3) September (7) August (4) July (4) June (3) May (3) April (8) March (16) February (7) January (23) December (30) November (38) October (33)
Tell me what you eat, i will tell you what you are.
ဗဟုသုတ (66) Italian Foods (27) Knowledge (25) food pic (25) video (17) Europe Foods (12) sauce (8) Salads (6) Sauces (4) soup (4) ကျွန်တော့် အကြောင်း (4) About Me (3) Asian Foods (3) dressing (3) salad (3) Soups (2) Asian Food (1) pasta (1) spice (1) tool (1) ဆင်ဖြူကျွန်း အောင်သိန်း (1)
E နှင့်စသော ဟင်းသီးဟင်းရွက် အမည်များ - အသီးအရွက် အပင်နံမည်လေးတွေကို facebookမှာ လာလာပြီး မေးကြလွန်းလို့ အချိန်မအားပေးမဲ့ ဘာသာပြန်လို့ ရသလောက် ဂရုလေးတွေခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် ပုံများအားလုံးကိုေ...
ဥပုန်းလေး ချက်စားကြရအောင့့့် - ချစ်သောမောင်နှမများအားလုံး မင်္ဂလာပါနော့့့်  မေတ္တာရပ်ဝန်းမီးဖိုဆောင်လေးထဲ မရောက်ဖြစ်တာ အတော်ကြာသွားခဲ့ပါပြီ့့့  ဖုန်တက်နေတဲ့ မီးဖိုဆောင်လေးကို သန့်ရှင်...
Myanmar TV Channel - ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေအတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ နာမည်ကြီး Channel အားလုံးကို စုစည်းပေးထားတဲ့ Website တစ်ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . . . . သိပြီး...
Media event: An Exquisite Afternoon Tea Experience with Master Patissier Eric Lanlard @ The St. Regis Singapore - Two-time winner of the British Baking Awards’ Continental Patissier of the Year, TV presenter, and founder of acclaimed cake emporium and cookery school Ca...
A simple girl who passionate about baking ;)
ပုဇွန်ချဉ် - ကျွန်မအန်တီလေးတစ်ယောက်ကမြောင်းမြတစ်ဖက်ကမ်းကွယ်လွမ်မှာနေပါတယ်။နွေကျောင်းပိတ်ရက်တွေ မှာရန်ကုန်ပုသိမ်သင်္ဘောကြီးစီးပီးမြောင်းမြကိုသွားလည်တိုင်းသင်္ဘောဆိုက်ဆိမ်...
My Pawpaw Photos 2013 - I took these pictures back in 2013 when my trees were full of fruits. This year I hadagood crop too but I didn't take any picture so I uploaded the 2013...
၂၀၁၅ ခု အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်တနင်္လာနေ့ တရားတော်များ။ - ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားတော်မူသော လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် အပိုင်း ၁ မှ ၈၂ အထိ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ Buddha FM ကို ဖုန်းကနေပါ တိုက်ရို...
'' အလွယ်ချက် အုန်းထောပတ်ထမင်း " - ရယ်ဒီမိတ်တွေပေါလောနေတော့ ကျွန်မလည်း အုန်းထမင်းကို ရန်ကုန်က၀ယ်လာတဲ့ ရယ်ဒီမိတ်နဲ့ပဲ ချက်လိုက်တယ်။ " ရွှေသန့်သန့် အုန်းထောပတ်ထမင်း " ဆိုတဲ့အထုပ်ကို...
Recipes of My dishes
ကြက်သား ပဲ ရည် သုတ် လေး လုပ်စားရအောင် - ကြက် သား ပဲ ရည် သုတ် လေး လုပ် စား ဖြစ် ရ တဲ့ အကြောင်း ကတော့ သမီးကြီး က FB မှာကျွန်မ သိတဲံ ညီမလေး တယောက် ရဲ cooking album ကြည့်ပြီး သူ စား ချင် တဲ့ အကြော...
Bus ကားပေါ်မှ ဟာသများ - တနေ့က မြို့ထဲကို အထည်သွားပို့တယ်။ အထုပ်တွေနဲ့မို့လို့ အဲကွန်းbus ပဲစီးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ၈၆ တက်စီးလိုက်တယ်။ ကားက ဘေးဖက် ၂ ဖက် မျက်နှာချင်းထိုင်စီးရတဲ့က...
ညီမတော် နှင့် အကိုတော်း)
ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ - ကျွန်တော့ဘလော့ဂ်သို့လာရောက်ကြည့်ရှုကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အလုပ်ကလေးနဲနဲရှုပ်နေ၍တရားတော်အသစ်များမတင်ပေးနိုင်သေးချင်...
မျက်ရည်ရဲ့ တန်ဖိုး - ကိုယ့်ဘဝမှာ မျက်ရည်ရဲ့ တန်ဖိုးဆိုပြီး ခံစားနားလည်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အမှတ်တရတွေ အများကြီးထဲက တစ်ချို့ကို ဖွင့်ပြောပြချင်နေမိတယ်။ ဟိုးးးးးးးးးတုန်းက ကိုယ့်ကို အရမ်...
ဗျတ်ဇရဲ. ပန်းပွင်.နဲ.ယက်တဲ. အိပ်မက်
Web Site Links - Myanmar Destination Management Company
ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက် များနဲ့ ဧကံဖြိုး - နေရာ က ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် လှိုင် နယ်မြေထဲ မှာအဖြစ် အပျက် က သုံးပွင့်ဆိုင် ရင်ခုန်မှတ်တမ်းသူတို့တတွေက ရဲရင့် .... ပြီးတော့ လှိုင်း ...နောက်တစ်ယောက် က မိုးခင်ခ...
Idea August, 2010 - Idea August, 2010 Idea August
Dr.Khin Maung Win(Liver)
Chaw Su's Food Friends
leo. Simple theme. Powered by Blogger.